China Jumbo Bag FIBC Fabric Cutting Machine CSJ-2200 ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta | VYT
Anyị na-arụ ọrụ na nrụpụta, ọkọnọ, na mbupụ nke FIBC Cutting na Spout Cutting Machine. Igwe a na-enye akwa akwa akwa bụ igwe dị arọ ma sie ike, nke ejiri ya mee ezigbo ihe. Ngwa ọrụ anyị na-enye ihe bụ sistemụ microprocessor, nke enyere ya na njikwa njikwa ọtụtụ atụmatụ. Igwe ihe eji arụ ọrụ na-echekwa ohere na njikwa mmadụ.
Anyị CSJ- 1400, CSJ- 2200 na CSJ-2400 bụ igwe ndị a pụrụ ịtụkwasị obi ma rụọ ọrụ nke ọma iji mepụta ogwe FIBC (Jumbo Bags) nke etinyere ogologo oge nwere ohere nke profaịlụ profaịlụ nke ndị ahịa chọrọ.
Sistemụ njikwa kọmputa nke akụrụngwa akụrụngwa akụrụngwa maka akpa jumbo na-eme ka ụwa dị elu AC na-achịkwa teknụzụ iji kwụọ ụgbọ ala, nke nwere njirimara nke nnukwu iyi, arụmọrụ dị elu, nkwụsi ike dị elu na obere mkpọtụ. Ebumnuche nke ogwe ọrụ dị iche iche, nke nwere ike izute ihe kwekọrọ na nke ndị ahịa dị iche iche. Usoro a nakweere ụdị nhazi nke China, nke dị mfe maka nrụnye na ndozi
1. PLC usoro nchịkwa etiti. Agba nwoke-igwe interface, nke na-eme ka ụbọchị-ntọala, ngosi, Ndekọ ọzọ doro anya na ezi, Mfe ọrụ.
2. Hydraulic akpaka jumbo-fabric mpịakọta nri & EPC unit, mụ, mfe ma dị mfe na-arụ ọrụ.
3. Kwadebere usoro mbubata ngwa ahia maka ngwa ngwa na ngwa ngwa.
4. Onwem na elu mma alloy ígwè holistic cutter, nke nwere uru dị ka ndị na-abụghị distortion ezi okpomọkụ ichebe, na Long ojiji-ndụ.
1 .Dị CSJ-2200
2 Max ọnwụ obosara 2200mm ma ọ bụ ahaziri
3 Cha ogologo ≥150mm
4 Icha nkenke -10 1-10cm
5 Akwa ọsọ ọsọ 45m / nkeji
6 Mepụta ikike 10-20 pc / min （ogologo 1600mm）
7 Nha nke oghere "O" Mm 600mm
8 Nha nke oghere "+" Mm 600mm
9 Njikwa okpomọkụ 0-400 ogo
10 Ike njin 10KW
11 Voltaji 380V 3phase 50Hz
12 Mkpakọ ikuku 6Kg / cm²
Nka na ụzụ chọrọ
1) CSJ-2200 jumbo bag cutting machine na jikọtara akụrụngwa maka ịkpụ nnukwu gburugburu akụkụ;
2) Site na ịrụzi ndozi ndozi akpaaka, ntụgharị mgbazi ntụgharị bụ 300 mm;
3) Na akpaka ákwà nri ọrụ (pneumatic);
4) Akụkụ nke igwe ejiji akpa akpa CSJ-2200 a kwadebere ya na obere okirikiri ma ọ bụ okirikiri ịkpụ gburugburu;
5) The crosscut ọnọdụ nwere ọrụ nke nchekwa ji kpachie oghere nchedo;
6) Ọ nwere ọrụ nke ịkpụ nnukwu okirikiri.
Etinyere ndị dị iche iche jumbo akpa ákwà ịcha dị ka, Jumbo akpa dina-ewepụghị / abụọ ewepụghị ákwà, Jumbo akpa otu-oyi akwa ákwà, Jumbo akpa ala cover, top cover, n'elu ọnụ ákwà.
Na nke a nke ọma e mere, kọmpat igwe, ị nwere ike itinye polypropylene ákwà iberibe na a chọrọ size nke spout onu. Ogologo na ngwaọrụ ịcha oghere nwekwara ike rụọ ọrụ iche.
Tupu ịmalite usoro ahụ, onye ọrụ ọrụ kwesịrị ịwụnye akụkụ ziri ezi nke oghere mbepụ oghere. Ekwesịrị imezi ọnọdụ nke oghere ahụ. A na-eme ebe etiti nke holing site na njikwa njikwa ihu. Mgbe ịtọsịrị ogologo ị chọrọ ogologo, ọrụ ahụ na-arụ ọrụ na akpaghị aka ruo mgbe ọ ruru ọtụtụ ihe mmemme.
Ọ nwere ike ịdị mkpa ka ị gbanwee oge, oge nke usoro ịkpụ na ọnọdụ okpomọkụ dịka ọkpụrụkpụ nke akwa ahụ. A na-eji aka aka ejiri nchịkọta ihe. Otu akpaka stacking unit dị optionally.
Xuzhou VYT Machinery and Technology Co., Ltd. ezubere ịzụlite na imepụta ihe niile metụtara FIBC, ahaziri nke ọma na injinịa maka FIBC inyeaka na akụrụngwa na-emecha ngwa.
Anyị na-arụpụta igwe maka imepụta FIBC ọtụtụ afọ, igwe VYT na-enye ndị ahịa ya ọrụ, maka ngwọta ahịa ka mma. Taa, ọtụtụ ndị ahịa na ihe karịrị mba 30 niile Wold nwere afọ ojuju maka ogo na ntụkwasị obi nke ngwaahịa na ọrụ anyị.
Anyị kwenyere na VYT ga-aka mma karịa, ihe ndị ahịa chọrọ bụ igwe anyị na-agwụchabeghị ka mma, nkwado ndị ahịa na nkwenye bụ mmanụ anyị ka mma!
Anyị na-emekwa igwe dịka arịrịọ ndị ahịa si dị, dị ka:
1.FIBC-1350 Automatic Fabric Cutting Machine
2. FIBC-2200 Automatic Fabric Cutting Machine
3. FIBC-6/8 Akpaaka ịchacha Ngwaọrụ
4. FIBC-PE Bottle Shape Liner Igwe
5. FK-NDJ-1 Square Shape liner igwe
6. YK-NDJ-2 Gburugburu Igwe Igwe Igwe Igwe
7. QJJ-Igwe igwe nhicha
8. CSB-28K Igwe Mbelata Ultrasonic
Nke gara aga: Jumbo akpa echebe webbing FIBC nnukwu akpa akaghị Cutting Machine FIBC-6/8
Osote: Ultrasonic ịcha akara igwe eji na okirikiri ekwe
Auto Fabric Cutting Machine N'ihi Jumbo akpa Nnukwu akpa
Fibc Auto akara Cutcha Ma ịkpakọba Machine
Fibc Spout tingcha Machine
Manual FIBC Fabric Cutting Machine maka Cross
Jumbo Bag Fibc Bag Full-Automatic Okpomọkụ tingcha ...
Auto FIBC ákwà ọnwụ igwe maka jumbo akpa ...